သောက်သုံး Straw, လူမီနီယမ်သတ္တုစက္ကူ, မျက်ရည်တိပ်, လွှဲပြောင်း Paperboard - Fancyco
တရုတ်စက်ရုံထဲကနေပစ္စည်းထုပ်ပိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံမှုရိုးရာပလပ်စတစ်အဆက်အသွယ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အသုံးပြု. သမားရိုးကျပလတ်စတစ် 100% ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးစွန့်ခွာအခါထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်အောင်မြင်နေသည်။ ဒါကြောင့်ရုပ်ရှင်လွ extrusion တန်ဆာများအတွက်အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ, polylactic အက်ဆစ်စေးပြီးပြည့်စုံသောစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာပစ္စည်းပြောင်းလဲမှုသည်မဟုတ်, အစအနိမ့်ထုတ်လွှတ်မှုများအတွက်စက်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မသာ, အသုံးပြုသူများသည်ထုတ်ကုန်၏ပိုကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုပေးပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာစွန့်ပစ်ပြီးနောက်တွင်လည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အာရုံစိုက်။
ကျနော်တို့ Plug စီးကရက်ထုပ်ပိုး, မျက်ရည်တိပ်နှင့် Tipping များအတွက် filter ကိုလှံတံ, စီးကရက်ထုပ်စက္ကူ, အတွင်းပိုင်းဘောင်ဘုတ်အဖွဲ့များအတွက်စက္ကူအရှေ့ဥရောပ, တောင်အာဖရိက, လူမီနီယမ်သတ္တုပါးစက္ကူ, Acetate ပိုက်ဆန်လျှော်, BOPP ရုပ်ရှင်အပါအဝင်စီးကရက်များအတွက်ကုန်ကြမ်းများတင်ပို့အတွက်အတွေ့အကြုံအပြည့်အဝအကွာအဝေးရှိသည် စက္ကူ။
ပလပ်စတစ်နှင့်အတူပြဿနာ: dayAmericans နှုန်းလူတစ်ဦးနှုန်း 1.6 ကောက်ရိုးကိုမြေကြီးပတ်ပတ်လည် 2.5 ကြိမ်အစဉ်အဆက်နေ့ကခြုံမှလုံလောကျကိုသုံးပါ။ သူတို့ထဲကအများစုဟာ straws.Ecosystem PollutionBecause သူတို့ဒါကြောင့်ပေါ့ပါးနေပလတ်စတစ်ဖြစ်ကြသည်ကောက်ရိုးသူတို့ပင်လယ်မှထွက်ဦးရှိရာရေနည်းလမ်းတွေသို့မှုတ်ခြင်းနှင့် wildlife.Not Recycle က Non-biodegradablePlastic ကောက်ရိုးထိခိုက်စေပြန်လည်အသုံးပြုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ , ကျနော်တို့ကြံ bagasse tablewares အပါအဝင်ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီး diposables အတွက်အထူးပြု! ထိုကဲ့သို့သောဒါပေါ်မှာခွက်, clamshell, ပန်းကန်, ဗန်း, ပန်းကန်နှင့်အမျှ wheet ကောက်ရိုးအစားအစာကွန်တိန်နာသူတို့ဟာပြိုကွဲကြဘူးသူတို့ကငါတို့မြေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ oceans.It Eco ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်ညစ်ညူးစေခြင်းနှင့် စားသောက်ဆိုင်, ပျော်ပွဲစားနှင့်ပါတီများအတွက်အသုံးပြုသည်အခြားတစ်ခါသုံးပစ္စည်းများ။
Fancyco ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ 14 နှစ်ကျော်အလီဘာဘာအတွက်ရွှေပေးသွင်းဖြစ်လာခဲ့သည် 2004 ခုနှစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံရှိသည်သော 2005 ခုနှစ်အတွက်သိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲအချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ 2015 ခုနှစ်တွင် Fancyco အောင်မြင်စွာနိုင်ဂျီးရီးယားနှင့်ယူဂန်ဒါဈေးကွက်ထဲသို့ဝင်နှင့်ဤနိုင်ငံများတွင်အတွက်စတစ်ကာစက္ကူနှင့်သန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်များအမှတ် 1 အမှတ်တံဆိပ်ကို set up ။ ယခုငါတို့ထုပ်ပိုးများနှင့်ပုံနှိပ်ပစ္စည်းများအတွက်အထူးနေကြသည်။